बालुवाटार छिर्नुअघि जसपाका नेताले भेटे देउवा | जनदिशा
बालुवाटार छिर्नुअघि जसपाका नेताले भेटे देउवा
काठमाडौं । नेकपाको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नाटकीय मोड लिएको नेपाली राजनीति भावी सत्ता समीकरणका लागि दलहरुले गरेको दौडधुपले रोचक पनि बनेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाइराख्ने रणनीति लिएपछि अरु दलहरुको भेटघाट र छलफलले तिब्रता पाएको छ।
संसद्को चौथो शक्ति भएपनि सत्ता समिकरणमा निर्णयक देखिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यतिबेला तानातानमा छ । त्यसैले जसपासंगको छलफललाई प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले महत्व दिइरहेका छन् ।
मौकामा चौका हान्न चाहेका जसपाका नेताहरुले पनि बिहीबार आफ्नो दौडधुपलाई तीव्र तुल्याएका छन् ।बिहीबार नै पदाधिकारी बैठकमार्फत राजनीतिक दलहरुसँग विकसित परिस्थितिबारे उच्च तहमा भेटवार्ता र छलफल गर्ने निर्णय गरेको जसपाले सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा दुई विपरीत ध्रुवसँग छलफल गरेको हो ।
जसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार छलफल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको दुवै दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै आन्दोलन गरेका कारण पनि दुवै दलले ओली सरकारको विकल्पमा साझा पहल गर्नुपर्ने सन्दर्भमा जसपाका नेताले देउवासँग प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । यद्यपि छलफलबाट ठोस कुनै सहमति भने नभएको बताइएको छ ।
लगत्तै उपेन्द्र यादवसहितका जसपाका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई भने सहभागी भएनन् । उनी स्वास्थ्यको कारण देखाएर बालुवाटार नगएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा भने उपेन्द्र यादवका अतिरिक्त जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अशोक राई, लक्ष्मणलाल कर्ण बालुवाटार गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको जनाइए पनि ठोस सहमति भने नजुटेको स्रोत बताउँछ । जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग थप छलफल गरिने जनाएको छ ।
Previous Previous post: देउवालाई भेटेलगत्तै भट्टराई निवास पुगे प्रचण्ड
Next Next post: ओली-जसपा छलफप्रति माधव समूहको असन्तुष्टि